1 Ịhọrọ ngalaba aha, host web, on on na na ewu ụlọ
2 Allotjat de manera estable contra WordPress.com
3 Kasị mma WordPress amb el vostre blog
4.3 2. Blog de menjar Okwu
5.2 Xicoia Ntụziaka Efrata
6 Usoro 5 dị mfe iji nweta blog gị n’ala
6.1 Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ bloc / lloc web
6.2 Número 3: Opinió ọdịnaya (na-elekwasị anya na visuals)
WP gburugburu (ụgwọ) – Esi nri, Food Blog, Yum
WP ngwa mgbakwunye – Ntuziaka kacha mma WP, Simmer, xicoria, esie
Ị maara … ọtụtụ blọọgụ ego na-enweta 6 ọnụ ọgụgụ taa bụ ndị mmadụ dị ka gị, wuru ya, n’enweghị ihe ọ bọla ma ọ bụghị agụụ na-adịghị agwụ agwụ banyere niche ha.
Obi dịkwa m ụtọ na ị na-ewere nzọụkwụ mbụ gị taa. Ja senzill, ka anyị bido.
Ịhọrọ ngalaba aha, host web, on on na na ewu ụlọ
Iji bloc de malites nri gri, he atọ mbụ ụ ga-achọ bụ:
A na ngalaba aha
Ọtụtụ mmadụ na-akparị maka iji ‘isi okwu’ na ngalaba aha nke simple Google gosipụtara ja no n’elelu maka mgbe ndị ọrụ chọwara okwu ndị ahụ.
Otú ọ dị, ọnụnọ nke isiokwu ahụ na ngalaba aha agaghịzi emetụta algorithme engine engine.
Iabụ, ụ bụrụ na ịchọrọ imepe blog banyere nri paleo, ọgaghị akpọ blog a paleofood.com. Ọbụlagodi, ime otu a agagh ịịịyeịyeịịyeị ọ b brownla SEO brownie.
Ọzọkwa, ị ga-amatarịrị na ọ dị mma ịmalite blọọgụ nri ma jiri aha gị dị ka aha ngalaba. Yabụ, ụ bụrụ Jane Jane, ị dị mma ịkpọ blog nri JaneDeo.com gị.
N’ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe nkwụghachi dị elu n’ikpeazụ n’ihi na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-aghọ onye ama ama gị na ama. Podríem ser-ne més grans i imperiosos.
Otu nnukwu ihe atụ nke ụdị també ahụ bụ nkwado ndị ahịa, Mkpụrụ Egwu. No vàrem fer-ho!, "clientsupportadvice.com".
Mgbe ị họọrọ ngalaba aha, wwere ike iji ngalaba aha na-edeba aha ọrụ dị ka Namecheap ede ya. Ma ọ bụ, ị nwekwara ike ịzụta ya site n’aka ndị na-eweta gị ma ọ bụrụ na ha enye otu. (Ụtụtụ n’ime ha na-enyefe onwe ha n’efu na atụmatụ kwa afọ.)
Es va poder enviar el lloc web a través del lloc web, na ọtụtụ n’ime ha na-abịa na nchịkọta WordPress que us explica. Ihe dị iche n’etiti akaụntụ nnabata WordPress nkịtị na akaụntụ Bochum jisiri ike bụ na n’ikpeazụ, ndị na-eweta ndị ọbịa na-elekọta nchekwa saịtị gị ma na-eme ka saịtị gị dị ọhụụụị.
N’okpuru, ana m akwado ndị ọrụ nnabata ndị ahịa a. Njikọ niile na-arụtụ aka na ntụle Jerry.
SiteGround – Nhọrọ nkeetị kacha mma na nkwado no esigbo ni ahịa.
Enwe Mmasị – Amfitrió web d’Egigbo, Build Builder.
Ndị na-edebe weebụ weke ike ịdị ọnụ ala dịka 3,99 $ / ọnwa na ọnụ ahịa dị ka $ 29 / ọnwa. Enwere on we git malite na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere atụmatụ ntinye na ntinye ma mechaa kwụọ ụgwọ ka okporo ụzọ gị na-eto.
Site na ụlọ ọrụ weebụ na aha ngalaba ahụ, ihe ọzọ ị ga – achọ ịhọrọ bụ usoro ikpo okwu maka iwuli saịtị gị – ma ọ bụ onye na – arụ ọrụ na saịtị ahụ.
No hi ha cap propietat de qualsevol CMS de WordPress.
Allotjat de manera estable contra WordPress.com
Ụzọ kachasị mfe iji ghọta ọdịiche dị n’etiti a onwe-hosting a WordPress.com akaụntụ bụ ile anya na URL gị ga-ele anya na nke ọ bụla.
Nke bebu webusaiti ewerela ya WordPress.com. O doro anya, ejiri akara mara WordPress niile.
És a dir, la vostra pàgina de menjar. Comprem els nostres usos web, en línia, ja no vàrem dir, no vam iniciar.
Weebụsaịtị a na-akwadota na mkpokọta WordPress.com bụ nke gị ma ọ bụrụ:
Ị bụ ONYE onye-na-elekọta blogger
ON GAGH per aconseguir … ma ọ bụ na ị maghị banyer ịmebi ịntanetị
No ho facis, sí que banyem njimara nke gị
Tu no teniu objeció de nmọrọ mmachi dị iche iche dịka enweghị nkwado maka plugins na ndị ọzọ
Notchọghị ire ere mgbasa ozi na saịtị gị (ọbụlagodi ọ bụghị ruo mgbe ị ghọrọ weebụsaịtị okporo ụzọ dị elu)
Ụ bụrụ na nke ahụ abụghị, gaa maka websaịtị WordPress kwadoro. És a dir, us sabem, també coneguts com a plugins de WordPress i complements de WordPress
(ma n’efu ma kwụọ ụgwọ) ma wuo ebe nrụọrụ weebụ ị nerew ike ịgba ọsọ na ọnụ ọgụgụ.
Na nke ahụ, ihe ndekọ niile dị na.
Dịla ugbu a blogmalite ịmalite blog gị. Maka nke a, ị ga-achọ isiokwu na plugins ole na ole.
Kasị mma WordPress amb el vostre blog
No hi ha cap lloc lliure de WordPress que no tinguis cap lloc web:
Kouki bụ maka gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ebe ọcha n’anya ma chọọ ntinye zen na ntakịrị. Kouki na-eji nnukwu font na-egosipụta ihe ngosi dị nnọọ mma. Club ya na otu n’ime ntinye ihe ntanetị ndị a na-emepụta (un tụrụ aro n’okpuru ebe a), ị ga-adịkwa njikere iji ndụ gị na-ebi ndụ.
Ngosi & nkọwa / Ọnụ: 129 dòlars
Cook’d Pro, que és capaç de crear WordPress amb una màquina de fer-ho, o per exemple. Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo dịn’elu, ọ na-elekwasị anya na foto.
Ọzọkwa, a na-ewu ja na ntọala Jenesis, nke a maara na ọ na-agba ọsọ na ọkụ. Ihe mkpuchi nke usoro a na-abịa na ngalaba dị iche iche maka ntọala SEO yana maka ntọala ndị ọzọ.
El Kwa Ụbọchị bụ isiokwu ọzọ nke Jenesis ị ga-elele. Lloc na nkwụsi ike na ọsọ nke ntọala nke Jenesis na-eji ya ma na-eji ọmarịcha ụlọ mara mma dị egwu
2. Blog de menjar Okwu
No trigueu d’utilitzar el nostre bloc en el bloc de valoracions de WordPress. Ọ na-abịa na ndekwaa ụzọ esi eme nri ma na-enyekwa gị ohere ịnabata ntinye nri sitere n’aka ndị na-agụ gị. Nkwado ntinye nri ndị a bụ nke a na-eji Cook cook – ngwa mgbakwunye $ 39. Ntuziaka na ndepụta noro usoro nri dị na isiokwu a na-abịa na igbe nlele, si otú a na-enyere n -ị-agụ akwụkwọ gị n’aka na ha agaghị echefu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa.
Lloc n’iji nke ọ bụla n’ime isiokwu ndị dị n’elu, ị ga-adị njikere na blog ọrụ.
Mana – Agbanyeghị etu esipụta isiokwu nwere ike ịbụ maka akwu, ị gaghị ekwe omume itinye ọrụ niile onye nwe weebụsaịtị nwere ike ịchọ.
Dịka ọmụmaatụ, maka blọgụ nri gị, wwere ike ịchọpụta na ịchọrọ ụzọ kachasị mma ma kachasị mma iji gosipụta nri gị, ma ọ bụ na ịchọrọ ime ka nri foto post gị dị mfe. Ọrụ dị ka ndị a apụtaghị na isiokwu ahụ.
Iji nweta ọrụ dị otú ahụ, plugins ịkwesịrị ịwụnye.
Consulteu els vostres complements de blocs de WordPress en els blocs de WordPress en els blocs de memòria:
Ntụziaka sitere na Simmer bụ ngwa mgbakwunye ọzọ na-enye gị ohere ikwuputa Ezi ntụziaka na blọọgụ gị. Ọ na-enye ntọala dị mfe iji depụta ihe ndị dị na ya, nye ntuziaka esi nri na ozi ndị ọzọ. Ntụziaka ị gbakwunye na iji ngwa mgbakwunye a bụ ihe eji achọ injin maka enyim n’ihi na ngwa mgbakwunye a na-eji atụmatụ nhazi Google Google iji wuo ụlọ ọrụ enyi SEO.
Xicoia Ntụziaka Efrata
Esi nri bụ a adịchaghị WordPress usommeputa ngwa mgbakwunye na-abịa na a drag-na-dobe uzommeputa onye-ewu ụlọ. Ọ na-abakwa na nhazi 10 dị njikere.
Na Ejicha ja, onye ụ bụla n’ime ndị na-agụ gị na-enweta akwụkwọ profaịlụ. Nri ja na-abịa juputara na oge, nnukwu ihe nyocha na ihe oriri na-edozi ihe gbasara Ezi ntụziaka / nri. Maka atụmatụ niile ọ na-enye, ngwa mgbakwunye bụ zuru ezu zuru ezu na $ 39.
En cas de complir els plugins, a continuació, es van poder afegir plugins ole a na m ak-akwado saịtị ọ bụla inwe. Ihe ndị a akọwapụtaghị akọwapụtaghị aha ọ bụla dị ka nke a, ma tinye uru na saịtị ọ bụla ejiri ha. Lelee ndepụta zuru ezu ebe a.
Ọ dị mma – Yab a nke a logistica na-elekọta. No hem estat habilitats, a la nit, a Isiokwu … els plugins de Yana no són.
N’oge a, ị dịla njikere ịmalite ịrụ ọrụ na blọgụ gị wee chọpụta isiokwu ị ga-ekpuchi, ugboro ole ị ga-ebipụta, nke usoro ntanetị mgbasa ozi na ị ga-anwale eren gabazie. Iji mee ka ihe dị mfe, gbalịa soro usoro ntinye 5 ahụ n’okpuru.
Usoro 5 dị mfe iji nweta blog gị n’ala
Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ bloc / lloc web
Chọrọ inweta nhazi blog gị nri ozugbo site na mbido n’ihi na ihe owuwu saịtị (karịchaa, isi nri ọzọ ya) ga-ekpebi etu ahụịịị igịbe ọrụ nke ndị ọrụ gị ga-esi dị.
Nke a dk mkpa maka blog nri maka ọdịnaya nke blog nwere ike ịgbatị ọtụtụ nri, nri, nri na ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na inwetara nchịkọta nhọrọ nke weebụsaịtị ahụ n’aka nri, ị ga-amalite mmalite dị mma.
E wezuga ya, iche maka ihe saịtị gị ma ọ bụ naanị ime atụmatụ nchịkọta saịtị gị ga-enye gị oge iji tụgharịa uche ihe ọdịnaya gị ga-adị na ihe dị iche iche ị ga-enyocha na blọọ.
Lee otu ihe atụ iji nye gị isi mmalite.
Kate blogger, a la vegada que es fa al CookieAndKate, no hem pogut accedir a un lloc web. Naanị lelee otú i si akọwa ihe ndị a na-eme na otú ọfụma na-adaba adaba:
Yabụ ọ bụrụ na ị ga – endeu saịtị nwere nnukwu ọdịnaya, wwere ike ịga maka menu dịka nke a.
Número 3: Opinió ọdịnaya (na-elekwasị anya na visuals)
Akụkụ akụkụ nke ọdịnaya gị ga-abịara gị. Ekele gị nka na niche. Otú ọ dị, ederede a ga-eme ka ọkara nke ọdịnaya gị
O di nwute, foto abughi i mmil nile. Mana nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike ịmụ.
Bụrụ ihe oyiyi nke achịcha a gwakọtara ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe, ihe oyiyi na-abụ akụkụ buru ibu nke otu blog nri. Nke pụtara na ị gaghị emeli foto foto mediocre. Ma obi dị ọtọ, wnhe nheị a n-nye nri nchịkọta nri na-enweghị atụ ịnerew ike ịmụta site na:
Ihe osise nke ihe oriri
N’okpuru ihe nkiri: Fotografia de menjar (Parfet de iogurt)
Otu esi eweputa foto di ukwuu site na iji ekwentị gi
Ọ bụrụ na ịnweghị oge ịmụ ọtụtụ ihe, ọbụlagodi bido site na ngwa ngwa a rụrụ arụ na nke ruru unyi:
Jide igwefoto gị na ja
Gbaa mbọ hụ na es va exigir igkụ mgbe ị gbaa.
Na mgbakwunye na ihe oyiyi nri, gbalịa ime ụfọdụ ihe okike dị ka nchịkọta ihe oyiyi na ntụziaka na-eji ngwaọrụ n’efu dika Canva o Ebube azu.
Ọzọkwa, ghọta na ọ na-ewe oge iji nweta ego site na blọọgụ – yabụ mee ihe niile ị na-eme ka ị na-enwe ndidi. Gha abanye ebe ahu ma oburu na inwa izu ike.
No hem escrit més que fer un bloc de blocs a WordPress. En aquest moment no hi hagué un ego que no hagués tingut cap ego, sinó que haurem de produir Food Blogger Pro. Ma ọ bụ, mee ihe kachasị mma ma soro ma mụọ blọọgụ nri ndị ọzọ wee mụta ihe na ha.
Ihe kachasị mma maka blog nri gị!
Editor Ntuziaka – E bu ụzọ bipụtara isiokwu a na saịtị anyị nwanyị BuildThis.io. Anyị emelitela ọdịnaya ahụ tupu anyị ebidoghachi akwụkwọ ebe a.